CEEB: Ma Ogtahay In Goolasha Eegmo La'aanta (No Look Goals) Ee Firmino Ay Ka Badan Yihiin Guud Ahaan Goolasha Sanchez Oo PL Ugu Mushahar Badani Uu Man United Usoo Dhaliyay? - Gool24.Net
CEEB: Ma Ogtahay In Goolasha Eegmo La’aanta (No Look Goals) Ee Firmino Ay Ka Badan Yihiin Guud Ahaan Goolasha Sanchez Oo PL Ugu Mushahar Badani Uu Man United Usoo Dhaliyay?
Weeraryahanka kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Brazil ee Roberto Firmino ayaa isbar-bardhig lagula sameeyay dhigiisa Manchester United ee Alexis Sanchez xaalad fadeexad ah ku dhex dhigay.
Firmino ayaa xalay xulkiisa Brazil kula soo guuleystay tartanka Copa America waxaana uu kasoo diiwaan gashaday halkaas xog uu kaga fiicnaa dhammaan xiddigaha koobka oo ahayd laba gool iyo saddex gool caawimo.
Dhinaca kale 27 jirkan ayaa xilli ciyaareedkii hore 16 gool usoo dhaliyay kooxdiisa isaga oo u suurogaliyay inay booska labaad ka galaan miiska kala sarreynta Premier League kuna guuleystaan UEFA Champions League.
Marka laga yimaado dhammaan goolasha kale ee uu soo dhaliyay Firmino ayaa kaliya la isbar-bardhigay tirada goolasha uu soo dhaliyay isaga oo goolka kasii jeeda (No Look Goals) iyo tirada guud ahaaneed ee uu Sanchez Man United usoo dhaliyay 18 bilood oo uu ku sugnaa.
Bobby Firmino ayaa waayihiisa ciyaareed soo dhaliyay toddoba gool oo uu jihada kasoo horjeeda goolka eegayay waxaana inuu kaliya taradaas gaadho ku fashilmay Sanchez kaddib 45 kulan oo uu soo metelay Red Devils.
Tan iyo markii uu Old Trafford kusoo gaadhay heshiiskii uu Henrikh Mkhitaryan Arsenal ugu biiray ayuu Sanchez soo dhaliyay shan gool oo kaliya mudo 45 kulan ah oo uu Manchester soo matalay.
Sanchez ayaa wakhti soo ahaa weeraryahanada caalamka kuwaada ugu wanaagsan waxaana uu naftiisa kusoo caddeeyay Barcelona iyo Arsenal si lamida xulkiisa Chile oo uu laba Copa America la qaaday sanadihii 2015 -2016.
Ugu dambayn, Laba kamida toddobada gool ee uu Firmino kusoo dhaliyay eegmada jihada qaldan ayaa yimid xilli ciyaareedkan waxaana uu kasoo dhaliyay xulka Peru iyo waliba kooxda Arsenal.
ABDIRAHMAAN RIGAAX says:
asc waan idin salaamay goal24 waxaan ahay taagero gool24 ah magaranayo aroor aan furay inernetka oo ana daawan wararka gool24.com sidoo kale taagero man u ah wararkina sida ugu badan waxaad ku taageer taan kooxda LFC marka labarbardhigo man u fadlan dhex dhexaad ahaada , taana waxaa u sababa in aaan isbarbardhigtaan nin seosonka badankisa ku maqnaa dhawwac ama kursiga kaydka nin kooxdisa line up ka ah mahadsanidin.